Ampahafantarina anao i Lorenzo Itza, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 27 May – 2 Jona · Global Voices teny Malagasy
Ampahafantarina anao i Lorenzo Itza, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 27 May – 2 Jona
Voadika ny 07 Jolay 2019 15:52 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Español
Sary natolotr'i Lorenzo Itza
Ho an'ny 2019, nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny fitenindrazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro misimisy kokoa ny momba an'i Lorenzo Itza(@lorenzoitza) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy
Maya avy ao amin'ny saikinosy Yucatán ao Meksika aho, amin'izao fotoana izao dia miaraka miasa aminà tetikasa isankarazany mifamatotra amin'ny tetikasa sosialy, ny fiteny / kolontsaina maya, mianga avy amin'ny fifandraisana sosialy, ny TIC tohanan'ireo matihanina avy amin'ny taranja samihafa toy ny psikolojia, ny antropolojia ary ny ‘sciences exactes’. Ny fiarahana niasa tany anatin'ireo vondrom-piarahamonina 92 mahery tao amin'ilay saikinosy no nahafahako nisaintsaina sy nahafantatra nisinisy kokoa momba ny kolontsaiko sy nandrasarasa ny eritreritro momba ny toerana misy ahy amin'izao fotoana izao manoloana ny fiteniko, ny maya. Manolotra atrikasa sy veladresaka ihany koa aho momba ny fampiasàna ireo fitaovana sy fomba fanao teknolojika mba hananganana tetikasa sosialy iraisan'ireo kolontsaina maro any anaty faritra misy ny maya.
Ao anatin'ny ampahany teknolojika, mandritra ireo fotoana malalaka ananako dia miaraka miasa amin'ny Wikipédia amin'ny teny Maya aho, izay mbola eo ampianarana mamindra, miaraka miasa amin'ny lafiny teknika ho an'ireo sehatra ety anaty aterineto toy ny elchilambalam.com, manao lahatsary asiana dikanteny na lahatsary amin'ny teny maya ho an'ireo ONG, fikambanana na hetsika sosialy mitodika amin'ny fiarahamonina.
Soa ihany, nahafahana nametraka tsikelikely ny fiteny maya ho hita ny asa teo aloha nataon'ireo mpikatroka, ny eny amin'ny oniversite, ny tambajotra sosialy ary ny faneken'ny governemanta an'ilay fiteny ao amin'ny Fanjakana Yutacan, na dia misy dindo be ao anatin'izany ihany koa aza ny resaka ara-tantara. Betsaka ny fampiasàna azy, na ivelan'ny aterineto izany na ao anatin'ilay fiteny, no miteraka adihevitra sy fisaintsainana momba izay mety hitranga ary haka tombony amin'io tranga io mba hisianà tetikasam-panorenana iraisana sy fanatsaràna mizotra mankany amin'ny fanamafisana ny fiteny maya ary ho fitaratry ny zavamisy amin'izao fotoana izao, ny hoavy ary ny lasan'ny maya ao amin'ny saikinosy Yucatán.
Ny dindon'ny tambajotra sosialy amin'ny fampiasàna amin'izao fotoana izao ilay fiteny dia manokatra adihevitra momba ireo filàna na fahafahana manana fanoratana lafatra ho an'ny aterineto sy momba ny fitsipi-pitondrantena amin'ny asan'ny mpandika lahatsoratra – mpandika teny amin'ireo lohahevitra fikatrohana, fahasalamana, kolontsaina ary lalàna. Ireo voalaza teo aloha rehetra ireo dia nosainina tao anatin'ny habaka virtoalin'ny tambajotra sosialy sy ny aterineto.
Hatrany am-piandohana aho no efa nihevitra izay hanomezana aina vao indray ny fiteninay tamin'ny alàlan'ny famoronana fitaovana nomerika mba handrisihana bebe kokoa ny olona hizara votoaty misimisy hatrany amin'ny fitenin-dreninay. Koa satria miova ny toedraharaha ankehitriny, misy ireo fanamby vaovao mitranga, ary efa tsinjo ankehitriny fa ahitàna fiovàna lantompeo samihafa amin'ny fiteninay na amin'ny fampiasàna soratra, ho fanomezana hevitra antsika dia mety ho toy ny fihainoana espaniola miteny any amin'ny firenena tsirairay ao Amerika Latina.
Nofinofiko ny mba hampiasàna misimisy kokoa ny fiteninay, mba ho hianga avy any amin'ny hetsika santatra any anatin'ireo vondrom-piarahamonina ny famoronana sy findramana teny vaovao, mba hisy mpikaroka tsy miankina maromaro kokoa sy mpanetsiketsika mba hanafaingana ny fampiatiana ilay fiteny any amin'ireo media virtoaly.